Tag: webka barashada | Martech Zone
Sidee Tafaariiqlayaashu u Kordhin karaan Ololaha Moobilka ee Kirismaska ​​si kor loogu qaado Dakhliga
Isniin, Disembar 1, 2014 Douglas Karr
Xilligan Kirismaska, suuqleyda iyo ganacsatadu waxay kor u qaadi karaan dakhliga si weyn: iyada oo loo marayo suuqgeynta moobiilka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira 1.75 bilyan oo milkiilayaasha taleefannada casriga ah adduunka oo dhan iyo 173 milyan oo Mareykanka ah, oo u dhiganta 72% suuqa taleefannada gacanta ee Waqooyiga Ameerika. Dukaameysiga qadka tooska ah ee aaladaha mobilada ayaa goor dhaweyd qabsaday desktop markii ugu horeysay 52% booqashooyinka degellada waxaa hada lagu sameeyaa taleefanka gacanta Hase yeeshe, macaamilku waqti buu sii joogaa
Dad aad u tiro badan ayaa u guuraya magaalooyin hal maalin oo gaarsiintu aysan suuragal ahayn oo keliya, laakiin horeyba uga jirtay magaalooyin badan oo ku yaal Mareykanka. Qeexitaannada Dukaamaysiga Dijital ah: Webrooming - marka uu macmiil u safro dukaan si uu wax uga iibsado ka dib markii uu baaray sheyga khadka tooska ah. Soo bandhigid - marka macaamilku wax ka iibsado khadka tooska ah ka dib markii uu baaray sheyga dukaanka ku jira. Kobaca qarxa ee ganacsiga mobilada ayaa u keenaya dukaanka macaamilka halkii uu hoggaamin lahaa